Ooredoo Business Devices
VuClip ဆိုတာ နိုင်ငံတကာမှာအကြိုက်တွေ့နေကြတဲ့ ဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်မယ့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။. VuClip မှာဆိုရင် လူကြိုက်များတဲ့အကြောင်းအရာများကို သေသေချာချာရွေးထုတ်ပြီး တင်ဆက်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် နီနီခင်ဇော် ရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့တေးသီချင်းတွေကို နားဆင်နိုင်မယ့်အပြင် တေးဂီတဗီဒီယို၊ သတင်းနဲ့ဖျော်ဖြေရေးဗီဒီယိုအပိုင်းတိုတွေကိုပါ အလွယ်တကူကြည့်ရှုရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
အူရီဒူးသုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ VuClip မှာပါတဲ့ ဗီဒီယိုအပိုင်းတိုတွေကို စိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်ရုံမက၊ အကန့်အသတ်မရှိ ဒေါင်းလုတ်ချနိုင်ပါမယ်။ တစ်ရက်ကို ၉၉ ကျပ်နှုန်း၊ တစ်ပတ်ကို ၅၉၉ ကျပ်နှုန်းနဲ့ သုံးနိုင်ပါသည်။ သုံးလိုက်တဲ့ဒေတာပမာဏအလိုက် ကျသင့်ငွေကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ www.vzoneom.com ထဲဝင်ပြီး “စာရင်းသွင်းမည်’ဆိုသည့်နေရာကိုနှိပ်ပါ (သို့မဟုတ်) တစ်ပတ်ကို ၅၉၉ ကျပ်နှုန်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် 7006 ကို “ON WEEKLY” လို့ SMS ပို့ပါ၊ တစ်ရက်ကို ၉၉ ကျပ်နှုန်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် 7006 ကို “ON DAILY”လို့ SMS ပို့ပါ။ အခုဝန်ဆောင်မှုမှာ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
စာရင်းပြန်ဖျက်ဖို့အတွက် www.vzoneom.com ထဲဝင်ပြီး မူလစာမျက်နှာရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ ရွေးစရာစာရင်းကနေတစ်ဆင့် “စာရင်းပြန်ဖျက်မည်”ဆိုသည့်နေရာကိုနှိပ်ပါ ဒါမှမဟုတ် 7006 ကို “OFF”ဟု SMS ပို့ပြီး စာရင်းသွင်းခြင်းကိုပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်အတွက် အောက်ပါမေးလေ့မေးထရှိတဲ့မေးခွန်းတွေမှာ ဝင်ကြည့်ပါ။
၁. VuClip Video Store အကြောင်းကိုရှင်းပြပါ
ရုပ်သံ၊ ဂီတ၊ ဗွီဒီယို အပိုင်းတို၊ ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ အကောင်းဆုံးအပိုင်းတွေစုစည်းထားတဲ့ အပိုင်းတို များကို ကြည့်ဖို့အတွက်ပါ။ ကဏ္ဍအစုံအလင်ပါဝင်ပြီး အကန့်အသတ်မရှိ ကြည့်ရှု ရယူနိုင်မယ့် ဗီဒီယိုစတိုးတစ်ခုပါ။ ဒီစတိုးကနေ ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရပါမယ်၊ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်လို့ရပါမယ်
၂. VuClip Video Store ထဲကို ဘယ်လိုဝင်ရမလဲ
ဖုန်းမှာပါတဲ့ browser တစ်ခုခုမှာ www.vzoneom.com လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါ
နောက်တစ်ကြိမ်တွင် ၀င်ရောက်ရလွယ်ကူရန် အခုလိပ်စာကို မှတ်ထားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့
၃. စာရင်းသွင်းခ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ၊ ဗီဒီယိုဘယ်လောက်ထိကြည့်လို့ရမှာလဲ
တစ်ရက်ကို ၉၉ ကျပ်၊ တစ်ပတ်ဆိုရင် ၅၉၉ ကျပ်နှုန်းနဲ့ စာရင်းသွင်းရပါမယ်
ကိုယ်ယူထားတဲ့သက်တမ်းအတွင်းမှာ ဗီဒီယိုတွေကို အကန့်အသတ်မရှိကြည့်နိုင်ပါမယ်
၄. မသုံးချင်တော့ရင်/စာရင်းဖျက်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Menu bar ရဲ့ ဘေးမှာ စာရင်းဖျက်နိုင်မယ့်နေရာကိုနှိပ်ပြီး စာရင်းပယ်ဖျက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၅. ဘယ်သူတွေ အသုံးပြုနိုင်မှာလဲ
အူရီဒူးအသုံးပြုသူမှန်သမျှ (ကြိုတင်ငွေဖြည့်စနစ်ဖြစ်စေ၊ သုံးပြီးမှပေးချေစနစ်ဖြစ်စေ) VuClip Video Store ကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
၆. iPhone မှာဆိုရင် VuClip Video Store မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ရမှာလား
iOS ဟာ Apple iTunes Store မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုတ်ချဖို့အတွက်သာ ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် iPhone နဲ့ဆိုရင် VuClip Video Store မှာပါတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်လို့သာရပါမယ်၊ ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့တော့ ရမှာမဟုတ်ပါ။
၇. ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကို ပြန်ကြည့်လို့ရမှာလား၊ ဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲ။
ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကို ဖုန်းထဲမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါတင်မက အရင်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရှိတဲ့ “မိမိစိတ်ကြိုက်ဗီဒီယို”မှာ အလွယ်တကူတွေ့နိုင်မှာပါ။
၈. အခုသုံးနေတဲ့ဟန်းဆက်နဲ့ပဲ ဒီဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်လို့ရမှာလား
ရပါတယ်၊ အောက်ကအချက်တွေနဲ့တော့ ကိုက်ညီရပါမယ်။
o မိမိဟန်းဆက်အနေနဲ့ အင်တာနက်သုံးလို့ရတဲ့ဖုန်း၊ ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရတဲ့ဖုန်း ဖြစ်ရပါမယ်။ ဟန်းဆက်လက်စွဲစာအုပ်မှာ ပြန်စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
o Mobile Internet (WAP/GPRS) ဆက်တင်အတွက် ချိန်ထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်
o (ကြိုတင်ငွေဖြည့်စနစ်နဲ့ အသုံးပြုနေတဲ့သူဆိုရင်) ငွေလက်ကျန်အလုံအလောက်ရှိရပါမယ်
o ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်မယ့် ဗီဒီယိုဖိုင်အတွက် ဖုန်းထဲမှာ နေရာလွတ် လုံလုံလောက်လောက် ရှိနေရပါမယ်
၉. တစ်ခါစာရင်းသွင်းထားပြီးရင် ဘယ်လောက်သက်တမ်းခံမလဲ
(မိမိစာရင်းသွင်းလိုက်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး) တစ်ကြိမ်မှာ ၁ ရက် သို့မဟုတ် ၇ ရက်သက်တမ်းရှိပါမယ်။ စာရင်းသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစလို့ သက်ဆိုင်ရာသက်တမ်းမကုန်သေးသရွေ့ ဗီဒီယိုတွေကို မိမိစိတ်ကြိုက် အကန့်အသတ်မရှိကြည့်နိုင်ပါတယ်
၁၀. စာရင်းသွင်းတဲ့အချိန်မှာ လက်ကျန်ငွေမလုံလောက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ
ဒါဆိုရင် စာရင်းသွင်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဗီဒီယိုတွေလည်း ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းငွေအလုံအလောက်ဖြည့်ပြီးမှသာ စာရင်းပြန်သွင်းကြည့်ပါ
၁၁. ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါ၊ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်တဲ့အခါ ဒေတာ အသုံးပြုခ ပေးရမှာလား
ပေးရမှာပါ၊ ဒေတာအတွက် ကျသင့်ငွေ ကောက်ခံသွားမှာပါ
၁၂. အကြာကြီးနေလို့မှ ဗွီဒီယိုတက်မလာတဲ့အခါ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ
အပြင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။ ဖုန်းကို ပါဝါအပိတ်အဖွင့်လုပ်ပြီးမှသာ ပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါ
၁၃. ဒေါင်းလုတ်လုပ်လိုက်ပေမယ့် မရလိုက်ဘူးဆိုရင် ဘယ်ကနေပြန်စရမလဲ၊ အဲဒီအတွက် ပိုက်ဆံထပ်ကုန်ဦးမှာလား
“မိမိစိတ်ကြိုက်ဗီဒီယို”ထဲမှာ အဲဒီဗီဒီယိုကိုပြန်ရှာပြီး ဒေါင်းလုတ်ပြန်ပြုလုပ်ပါ။ ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ရသွားတယ်ဆိုရင်သာ သက်ဆိုင်ရာဒေတာပမာဏအတွက် ကျသင့်ငွေကိုပေးရမှာပါ
၁၄. လိုင်းမမိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ရော ဒေါင်းလုတ်ချထားပြီးသားဗီဒီယိုကို ပြန်ကြည့်လို့ရမှာလား
ဖုန်းထဲမှာသိမ်းထားပြီးပြီဆိုရင် အဲဒီဗီဒီယိုကို အချိန်မရွေးပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်
၁၅. ဝိုင်ဖိုင်သာမိတဲ့နေရာမျိုးမှာ VuClip Video Store မှာပါတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းလုတ်ချနိုင်မှာလား
၁၆. VuClip 3-days free trial ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
VuClipသို့စာရင်းမသွင်းရသေးသော သုံးစွဲသူအသစ်များသည် စာရင်းသွင်းပြီး ပထမဆုံး၃ရက်ကို အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ပထမဆုံး၃ရက်အတွက် စာရင်းသွင်းခပေးရန်မလိုပါ။ ပုံမှန်ဒေတာအသုံးပြုခသာကျသင့်ပါမည်။ ၃ရက်မြောက်နေ့ရောက်သောအခါ နောက်တစ်နေ့တွင်အလိုလျောက်သက်တမ်းတိုးမည့်သတိပေးမက်ဆေ့ခ်ျရရှိပါမည်။ ၄ရက်မြောက်နေ့တွင် နေ့စဉ် သို့မဟုတ် အပတ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုကို အလိုလျောက်သက်တမ်းတိုးပါမည်။ ပယ်ဖျက်ရန် 7006သို့ “OFF”ဟုပေးပို့နိုင်ပါသည်။
၁၇. Free trialကို မည်သူအသုံးပြုနိုင်ပါသနည်း။
ပြီးခဲ့သည့် ၃၀ရက်အတွင်း VuClipကိုစာရင်းသွင်းမထားသော မည်သည့်သုံးစွဲသူမဆို free trialကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရက်၃၀အတွင်းစာရင်းသွင်းထားသောသုံးစွဲသူများသည် ပယ်ဖျက်ပြီးရက်ပေါင်း၃၀ကြာပြီးလျှင် free trialကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
၁၈. VuClip free trial ၃ရက်ကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ပါသနည်း။
ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်စာရင်းသွင်းသူအသစ်ဖြစ်ရပါမည်။ www.vzoneom.com သို့ဝင်ရောက်ပြီး ပင်မစာမျက်နှာပေါ်ရှိ စာရင်းသွင်းရန်နည်းလမ်းများကို ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။
ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတို့တွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်
VuClip ဆိုက်အတွင်းဝင်ရောက်၍ မိမိစိတ်ကြိုက်ရှာဖွေခြင်း၊ ဂိမ်းဒေါင်းလုတ်ချခြင်းတို့အတွက် အင်တာနက်အသုံးပြုခ ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်
အူရီဒူးဖုန်းအချင်းချင်း SMS ဖြင့်ဆက်သွယ်ဖို့အထူးအစီအစဉ်များ
အင်တာနက် Pack လက်ဆောင်